बस भित्रै महिलालाई देखेर हस्तमैथुन गर्ने ती युवक को हुन्? ( भिडियो सहित)
शुक्रबार, माघ ११, २०७५ सारङ्गी न्युज
काठमाडौँ । सार्वजनिक सवारी साधनभित्र एक पुरुषले अश्लील क्रियाकलाप गरिरहेका भिडियोहरु सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश फैलिएको छ।
एउटा भिडियो २ मिनेट २० सेकेन्डको छ। तीन महिना अगाडि नै अश्लील भिडियो राख्ने वेबसाइटमा यसलाई राखिएको भए पनि पछिल्लो समय फेसबुक ग्रुपहरुमा यो भाइरल हुन पुग्यो। भिडियोमा ‘यो गाडी उताबाट जान्छ नि’, ‘हिँड्नै मन लागेको छैन।
अघि त डल्लु पुलबाट गाडी चढेको‘, ‘यो गाडी टेकु जान्छ है?’ भनेको आवाज सुनिन्छ। गाडी चलेको हुँदैन। भिडियोमा केटाको अनुहार देखिएको हुँदैन तर ज्याकेट र खैरो ट्राउजरमा चप्पल लगाएको देखिन्छ।
गाडीभित्र बसेका ती युवक अश्लील हर्कत गर्दै हस्तमैथुन गरी वीर्यपतन गरिरहेको देखिन्छ। गाडीभित्र बसेका ती युवक अश्लील हर्कत गर्दै हस्तमैथुन गरी वीर्यपतन गरिरहेको देखिन्छ।
ती युवक को हुन्?
सार्वजनिक सवारीमा यस्तो अश्लील क्रियाकलाप गर्दा किन कसैले केही कारबाही गरेन? एउटा भिडियोमा यात्रुले चाल पाएको झैँ पनि देखिन्छ। तर पनि उनले कुनै कदम चाल्दिनन्।महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताए।
उनले भने,’ भिडियो हेर्‍यौँ। तर को हो? गाडी कहाँको खुलेको छैन। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।
सार्वजनिक सवारीमा यस्तो गतिविधि गर्ने जो भए पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ।‘महिलालाई दुर्व्यवहार गर्ने नियतले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीले केही अघि उपत्यकामा सेफ्टी पिन स्टिङ अपरेसन सञ्चालन गरेको थियो।
शुक्रबार, माघ ११, २०७५, ०८:०१:००
#बसभित्र यस्तो कुकृत्य